कम्प्युटर गेम अधिकांश मानिसहरू जीवनलाई एक भाग हो। यो एकदम व्यावहारिक भर्चुअल संसारमा केहि सुन्दर राजकुमारी देखि, हुन र bloodthirsty Orc संग समाप्त सकिन्छ, अचम्मको छैन। खेल मान्छे आराम र एक मेहनती वा स्कूल दिन पछि आराम गर्न अनुमति दिन्छ। तर जेन, आउन कसरी कान अन्तर्गत निरन्तर माउस क्लिक व्यवहार गर्नुभयो जब?
यस्तो कसैले अरूलाई तिनीहरूलाई वर्षा वा हावा को ध्वनि रूपमा बुझ्ने, बिल्कुल कष्टप्रद सुनिन्छ। तथापि, "rumble" क्लिक पागल ड्राइव सुरु भने, त्यसपछि यो कसरी शान्त गेमिङ माउस प्रयोग गर्न बारे सोच्न समय। इन्टरनेटमा तपाईं पहिले नै अवस्थित उपकरण आत्म-सुधार कसरी निर्देशन धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। तर, यो मामला मा यो आवश्यक ग्याजेट खोल्ने र पिन मोड छ। यो उपकरण तयार बनाएको मौन माउस किन्न राम्रो pathetic, त्यसैले धेरै सजिलो देखिन्छ देखि। तल खेलाडीहरूलाई र आकस्मिक प्रयोगकर्ताहरूबाट प्रतिक्रिया आधारित संकलित कम्प्युटर चूहों को एक स्तर छ।
M330 Logitech मौन प्लस को छ
यो को सौन्दर्य मोडेल प्रयोगकर्ता क्लिक गुमाउन गर्दैन छ। शान्त माउस बटन सामान्य तरिका मा थिचिएको छन्, तर वस्तुतः कुनै ध्वनि प्रकाशित छैन। Logitech निर्माता 90% द्वारा हल्ला स्तर कम गर्न सक्षम थियो। यी परिणामहरू अझै केही समान उपकरणहरू घमण्ड गर्न सक्दैन। त्यसैले, यो मोडेल सुरक्षित quietest माउस रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन।
M330 एउटै कोठामा जुवा लत हुनुहुन्छ नगर्ने मात्र मान्छे सुन्न सक्दैन, तर पनि उसले आफूलाई। यो कारणले गर्दा यो उपकरणको बरु सख्त डिजाइन गर्न उपयुक्त छैन मात्र क्लिक उपकरणहरू को सिम्फनी सुनेर दिन खर्च गर्न बाध्य छन् जो कम्प्युटरमा खेल, तर पनि कार्यालय कार्यकर्ता, को प्रशंसक छ भने छ।
डच निर्माता मौन माउस भनिन्छ मौन कम्प्युटर चूहों को एक लामबद्ध विकास भएको छ। 7000V मोडेल स्तर topped। यसको मुख्य लाभ बाहेक - मौन तपाईं बटन थिच्न गर्दा अतिरिक्त लाभ को एउटा ठूलो यन्त्र विशेषता छ। सबै को पहिलो यो मोडेल पूर्ण आफ्नो हात मा, आफ्नो औंलाहरु सही बटन अप पुल गर्न आवश्यक छैन मिलेको बताए गर्नुपर्छ। माउस नरम-स्पर्श प्लास्टिक बनेको छ, त्यसैले यसलाई आफ्नो हातमा प्रयोग घण्टा पछि पर्ची छैन।
मोडेल को मात्र drawback - एक अप्टिकल सेन्सर, कहिलेकाहीं सतह केही प्रकार मा काम गर्छ, जो छैन। साथै, कम्प्युटर, यो केवल मौन कुञ्जीहरू गर्न शान्त माउस को समीक्षा अनुसार। व्हील एकदम चर्को rotates।
यो मोडेल यसको पूर्ववर्ती भन्दा अलिकति सानो छ। यो त्रुटिहरू 7000V र थप शक्तिशाली लेजर सेन्सर फिक्स। माउस छैन पनि गम्भीर खेल अन्तर्गत "sharpened" छ, तर यो कार्यालय को लागि आदर्श छ। उपकरणको शरीर छ कि प्रयोगकर्ता धेरै सुखद छैन चमकदार सामाग्री बनेको छ। तर, उचित मूल्य, यो शान्त माउस यो मध्य-मूल्य खण्ड मा सबै भन्दा राम्रो बनाउँछ।
यो नियन्त्रक खेलाडीहरूलाई अपील संभावना भन्दा बढि छ। नरम-स्पर्श प्लास्टिक ढाकिएको शरीर, मधुर स्वर चमकदार आवेषण पतला। यसको आयाम यस मोडेल छ जो एक बिट यसको प्रयोग को स्कोप सीमित predecessors, भन्दा बढि छ। यो ल्याप्टप र घर प्रयोगको लागि ठूलो छ। तर कार्यालय खेलाडीहरूलाई, krupnovat को राय मा छ। तर, हामी quietness devaysa कुरा भने, यो ठीकै सबैभन्दा सफल समाधान सूचीमा छ।
कम्प्युटर गेम कुरा, "Reiser" बाट नियन्त्रक उल्लेख छैन। सपना - कुनै पनि खेल चरणको यो माउस लागि। उज्ज्वल र आक्रामक स्टाइल, र प्रभावशाली आयाम यस मोडेल घर मा द्यूत लागि इष्टतम समाधान बनाउन। हामी "नेक्सस" को एक लाइन संग तुलना भने, Naga लेजर सेन्सर संवेदनशीलता, जीत जो तथ्याङ्कले धेरै 8200 रूपमा डीपीआई छन्। स्थित एक उपकरणमा एकै समयमा 19 बटन तपाईं कुनै पनि खेल रमाइलो गर्न सक्छन् जो मार्फत उत्पन्न।
तैपनि, कुञ्जीहरूको यस्तो विविधता छैन कार्यालयमा सबै दिन खर्च गर्नेहरूलाई उपयोगी छन्। त्यसैले, यो शान्त माउस सुरक्षित खेल भनिन्छ गर्न सकिन्छ। तर, पनि अनुभवी खेलाडीहरूलाई त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कमियां छन् पाउनुहुनेछ। एक अप्ठ्यारो र बरु उपकरणमा capricious सबै प्रयोगकर्ताहरूको पहिलो देख्यौं। पहिलो पटक आफ्नो कम्प्युटर बस उपकरण पहिचान गर्न सक्छ। साथै, धेरै एक वायरलेस माउस मोड को अभाव भ्रममा। यसलाई पहिलो स्थानमा खेल नियन्त्रकहरु आफ्नो आन्दोलनहरु छैन सीमित हुनु पर्दछ, तर केही कारणले विकासकर्तालाई यो महत्त्वपूर्ण nuance गर्न ध्यान छैन, जस्तो थियो।
हामी एक सभ्य ग्याजेट लागत विचार भने, यो राम्रो बस मुख्य कार्य copes - मौन छ। तथापि, तपाईं अझै पनि आदर निर्माता गर्न, देखि उपकरण यसको स्थायित्व र गठन गुणस्तर द्वारा विशेषता छ तिर्न गर्नुपर्छ।
तपाईं आफ्नो कम्प्युटर को लागि एक महंगा मौन माउस किन्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं थप कम अन्त मोडेल ध्यान गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई बीच उपकरण A4TECH छन्। माउस मूल्य 300 भन्दा बढी rubles छैन, त्यसैले यो धेरै आशा छैन। उपकरणको यसको मुख्य कार्य चार विश्वस्त copes संग। बटन muffled ध्वनि थिचेर, तर यो एक पारंपरिक अप्टिकल माउस क्लिक रूपमा असुविधाको र कष्टप्रद ल्याउन छैन। समीक्षा अनुसार, यो नियन्त्रक घर र कार्यालय प्रयोगको लागि आदर्श छ, तर तपाईं आफ्नो कम लागत विचार गर्दा, यो मानक माउस लागि एक उत्कृष्ट प्रतिस्थापन हुनेछ।
तर, यो विकल्प छैन खेलाडीहरूको लागि उपयुक्त छ। दुर्भाग्यवश, Ergonomics र यो मोडेल को प्राविधिक विशेषताहरु खराब गेमप्लेको संग संयुक्त छन्। तसर्थ, खेल जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो भने, यो अधिक महंगा मोडेल ध्यान लायक छ। यसबाहेक A4TECH मात्र युएसबी-केबल मार्फत काम गर्छ, त्यसैले यो ग्याजेट तीव्र गेमप्लेको समयमा प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छ।
यो आर्थिक वायरलेस माउस घण्टी वा तपाईं कुञ्जीहरू थिच्नुहोस् गर्दा बीप छैन। MUSW-204 दुई बटन र एक पुस्तक पाङ्ग्रा, यो कार्यक्षमता यसलाई समाप्त संग सुसज्जित छ। यो embodiment घर र कार्यालय प्रयोगको लागि आदर्श छ। जब तपाईं प्रेस माउस बटन कुनै पनि ध्वनि प्रकाशित भएको छैन, तर औंला उपकरण बटन एक सानो थिचिएको कि महसुस। आवास एकाइ धेरै सहज र Ergonomic छ। सानो र शान्त कम्प्युटर माउस सजिलै पनि लामो समयसम्म प्रयोग संग नियन्त्रक प्रयोगकर्ता औंलाहरु थकित प्राप्त छैन भनेर, आफ्नो हात मा फिट।
निस्सन्देह, यो मोडेल एकदम उत्पादनहरु नेक्सस, Razer वा Logitech देखि प्रदर्शन कमसल छ, तर यो 2.5 पटक सस्ता लागत। चयन गर्दा एक मौन माउस उत्सर्जित ध्वनि को स्तर, तर पनि सेन्सर र कुञ्जीहरू को संवेदनशीलता मात्र होइन विचार गर्न आवश्यक छ। उपकरण बिल्कुल मौन छ, तर त्यो काम सतह पहिचान गर्न राम्रो हुने छैन भने, यो धेरै unnerving हुनेछ। त्यसैले, यन्त्र खरीद यसका सुविधाहरू, लाभ र बेफाइदा परिचित गर्नुपर्छ अघि।
आफ्नो पीसी अपग्रेड: स्मृति कसरी वृद्धि गर्न
स्थापना वाईफाई dir-620 पासवर्ड
शीर्षक: "मुद्रक बन्द गरिएको छ।" कसरी उपकरण अन गर्न? केही सरल सुझाव
कसरी मानिसको हृदय, आफ्नो कार्य के हो गर्दैन?
र तपाईं जान्दछन्, समाज र प्रकृति को सम्बन्ध के हो?
लामो कपाल मा रचनात्मक केश के हो
"विश्व जिम Kutuzovsky" फिटनेस क्लब: मूल सूचना